ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ ကြည့်ခြင်း Skip to content
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > စီးပွားရေး > ဆောင်းပါး > ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ ကြည့်ခြင်း ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ ကြည့်ခြင်း အောင်သူငြိမ်း	| သောကြာနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်	"ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ" ထွက်လာတယ်။ တရားဝင် သတင်းစာတွေမှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာ မဟုတ်သေးပေမယ့် အတည်နီးပါး အစိုးရပြန်တမ်းဂေဇက်က မီဒီယာတွေမှာ ပေါက်ကြားလာတယ်။ ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်က တလောကမှ စီးပွားရေးပညာ မဟာဘွဲ့ရထားတဲ့ ကျနော့်မိတ်ဆွေညီငယ် တယောက်က ပြောလာတယ်။ ၃- ရက်လောက် တွေးပူပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သူသာ စစ်တပ်ထဲ ၂-နှစ်သွားနေရရင် ဘာဆက်လုပ်ရပါ့ဆိုပြီး တွေးပူမိ တဲ့ အကြောင်းပါ။ ကျနော်ကတော့ သူပြောတာကို စီးပွားရေးပညာသဘောနဲ့ အခွင့်အလမ်းအတွက် ပေးရတဲ့တန်ဖိုး (Opportunity cost) ကို ပြောတာလို့ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာမှာ အခွင့်အလမ်းတခုအတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ တန်ဖိုး (Opportunity cost) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီလို စဉ်းစားချက်ကို မူဝါဒချမှတ်ရာ နေရာအတော်များများမှာ အသုံးပြု ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးပညာ သဘောမှာ အရင်းအမြစ် (Resources) တွေက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ရှားပါးပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရှားပါးနေတဲ့ အရင်း အမြစ်တွေကို အကောင်းဆုံးဘယ်လိုနေရာချမယ်ဆိုတာက စဉ်းစားရတာက စီးပွားရေးပညာသဘောပါ။ (Opportunity cost) ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အခွင့်အလမ်းတန်ဖိုးဆိုတာကို ဒီလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ စွန့်လိုက်ရတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ရလဒ် (output forgone) တွေသာမက အချိန်ကုန်တာ၊ လူတွေက ကိုယ်စိတ်ပါဝင် စားမှု မရှိတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရလို့ မအောင်မြင်တာ၊ ထုတ်လိုက်တဲ့ ထွက်ကုန်တွေရဲ့ အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာ (utility) တွေကိုလဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ Opportunity cost is the cost related to the next-best choice available to someone who has picked among several mutually exclusive choices. (တခုယူရင် တခုမရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေကြားထဲမှာ ကိုယ်က တခုခုကို ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါ ကျန်တဲ့၊ လက်လွတ်သွားတဲ့ တခြားအကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်း တွေကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။) ဒီသဘောကို နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် ဂျွန်စတော့ မေးလ် (John Staurt Mill) က စတင် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ စီးပွားရေးပညာဆိုတာ ရှားပါးမှု (scarcity) နဲ့ ရွေးချယ်မှု (choice) ကြားထဲက အခြေခံ ဆက်ဆံရေး တခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရှားပါးလှတဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ဘယ်လိုအကောင်းဆုံး ထိရောက်အောင်၊ အကျိုးရှိအောင် စဉ်းစား အသုံးချကြဖို့ ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေးလိုက်ရမယ့် တန်ဖိုးရယ်၊ ပြန်ရလာမယ့် ရလဒ်ရယ်ကို တွက်ချကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုရှင်းအောင် ဥပမာတွေနဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ (၁ဝ) တန်းအောင်ပြီးတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်က ကျောင်းနားပြီးတော့ အလုပ်လုပ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် တက္ကသိုလ် ကောလိပ် ဆက်တက်မယ်ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုလုပ်ရဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူ အလုပ်ထွက်လုပ်ရင်တော့ သေချာတာက ပိုက်ဆံငွေကြေး ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကို ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ငွေကုန်ကြေးကျရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် တချိန်မှသာပဲ အလုပ်ခွင်ကို ပြန်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ မိဘက ပိုက်ဆံမချမ်းသာဘူးဆိုရင်လဲ ကျောင်းသားဘဝ မှာ ချို့ချို့ငဲ့ငဲ့ နေရပါအုံးမယ်။ အလုပ်ထွက်လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြင့် သူ တခြားအခွင့်အလမ်းတွေကို စွန့်လိုက်ရပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လေ့လာထားချက်အရ ကောလိပ်အောင်ပြီးသူတွေက ပိုပြီးဝင်ငွေကောင်းတယ်။ အလုပ် အကိုင်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းများတယ်လို့ သုတေသနတွေက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ၂-နှစ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ရင် သူဌေး ပေါက်စလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ပညာတတ်ကြီးလဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေး တယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါသာမက တက္ကသိုလ်မှာ သူ့မိတ်ဆွေ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးလဲ ပိုကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှု (critical thinking) လဲ ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါတယ်။ တခြား ပိုကောင်းတဲ့ ဘဝရွေးချယ်စရာလမ်းတွေလဲ ပွင့်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ပိုအဆင့်မြင့်မား စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတင်မက အခြား ရွေးချယ်စရာ အခွင့်အလမ်း၊ အကျိုးအမြတ်များစွာလဲ ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ဘဝအခြေအနေအရပဲ ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်သန်ရာ စိတ်ပါရာ မဟုတ်လို့ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အာရုံစိတ်ဝင်စားတဲ့ အလုပ်ကို ရွေးချယ်ကြတာ ရှိပါတယ်။ တခုကိုရဖို့ ကျန်တာတွေ စွန့်လွှတ်ပေးလိုက်ရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ နောက်ဥပမာတခုကတော့ နိုင်ငံတခုရဲ့ စီးပွားရေးမှာ ထွက်ကုန် ၂ မျိုးပဲ ထုတ်တယ်ဆိုပါစို့။ တခုက ပန်းသီးတွေထုတ်တယ်။ ကျန်တာတခုက ရှူးဖိနပ်တွေ ထုတ်တယ် ဆိုပါစို့။ စီးပွားရေးစနစ်တခုမှာ ထုတ်လုပ်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် သုံးရတာက မြေ၊ လုပ်အား၊ အရင်းအနှီး (Land, Labor, Capital) တွေပါ။ ဒါတွေအားလုံးကို စိုက်ထုတ်သုံးစွဲရင် ဆိုပါစို့၊ ပန်းသီးက သန်း ၁ဝဝ ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ရှူးဖိနပ်ချည်းပဲ ထုတ်မယ် ဆိုပါစို့။ ဖိနပ်အစုံ ၄ သန်း ထုတ်နိုင်ပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ တခုထုတ်ရင် ကျန်တာတခု မရပါဘူး။ သို့သော်လဲ တချို့လူတွေက ပန်းသီး ထုတ်- တချို့လူတွေက ဖိနပ်ထုတ်ဆိုရင် ပန်းသီးလဲ တချို့ရ၊ ဖိနပ်လဲ တချို့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကြားထဲမှာ ဆက်သွယ်မှု တခု ရှိလာပါတယ်။ Production Possibility Frontier (Production Possibility Curve) "ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေပြ မျဉ်းကွေး" လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလုံး ရအောင် အကန့်အသတ်ရှိနေတဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင် အသုံးချရမယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ မူဝါဒချမှတ်သူတိုင်းက ဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားကြရပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ စွန့်လိုက်ရတဲ့ ထုတ်လုပ်မှုရလဒ် (output forgone) တွေသာမက အချိန်ကုန်တာ၊ လူတွေက ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရလို့ မအောင်မြင်တာ၊ ထုတ်လိုက်တဲ့ ထွက်ကုန်တွေရဲ့ အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာ (utility) တွေကိုလဲ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားတွေမှာ အစိုးရတွေက ဒုံးခွင်းဒုံးကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်တွေ ချမယ်ဆိုတော့လဲ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ရလဒ်ကို တွက်ကြရပြန်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးငြင်းခုန်ကျတော့ အခုလို opportunity cost ကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးကြတာ တွေ ကြားဖူးပါတယ်။ လူတဦးချင်းမှာလဲ အခုလို စွန့်လွှတ်လိုက်ရမယ့် အခွင့်အလမ်းကိစ္စတွေ ကြီးကြီးမားမား ရှိပါ တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်သားလုပ်ရမယ် မဲချတော့ စစ်သားလုပ်ရမယ့် အဆိုတော်ပေါက်စ၊ မင်းသားပေါက်စတွေက မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ သူတို့ ၂-နှစ် မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်ရင် နာမည်ကြီးအဆိုတော်၊ မင်းသားလဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲသလို မဟုတ်ဘဲ စစ်တပ်ထဲ တာဝန်အရ (စစ်မတိုက်ရဘူးပဲ ထားအုံး၊ အသက်သေလောက်အောင် မစွန့်စားရဘူးပဲ ထားအုံး) ၂-နှစ် သွားနေရတဲ့အခါ အရွယ်ကောင်းမှာ နာမည်တက်နေစ အခွင့်အရေးလေးလဲ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ Labor ဆိုတဲ့ လူလုပ်အားကို ကုန် ထုတ်လုပ်မှုမှာ သုံးမလား၊ စစ်တိုက်တဲ့ နေရာမှာ သုံးမလားဆိုတာ အစိုးရတခုအဖို့ ပြန်စဉ်းစားဖို့ အများကြီးကောင်းတဲ့ အနေအထားပါ။
သဘောကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ မင်းသား "နေတိုး" ၂-နှစ်လောက် စစ်မှုထမ်းနေရလို့ ပျောက်သွားရင် နာမည်ကျော်ပါတော့ အုံးမလားဆိုတာမျိုး တွေးပူစရာပါပဲ။ အဲဒီ ၂-နှစ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ရင် သူဌေးပေါက်စလဲ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ပညာတတ်ကြီးလဲ ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေး တယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေတွေက အများကြီးပါ။ အလားတူ နိုင်ငံတခုမှာလဲ ဆုံးရှုံးစရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ခုနက တင်ပြခဲ့သလို နိုင်ငံတခုရဲ့ မြေ၊ လူလုပ်အား၊ အရင်း အနှီး (Land, labor, capital) ဆိုတဲ့ အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေကို ကောင်းကောင်း ထိရောက်အောင် နေရာချဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ Labor ဆိုတဲ့ လူလုပ်အားကို ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာ သုံးမလား၊ စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာ သုံးမလားဆိုတာ အစိုးရတခုအဖို့ ပြန်စဉ်းစားဖို့ အများကြီးကောင်းတဲ့ အနေအထားပါ။ (ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ဒီနေရာမှာ ခဏ မစဉ်းစားဘဲ ထားပါတယ်။) အရင်းအမြစ်တွေက အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ရှားပါးပါတယ်။ ထိရောက်အောင် ဉာဏ်ကို လွှာသုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့။ ကျနော်တို့နိုင်ငံက ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကထဲက ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ခရီးတခုကို စနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုပါစို့။ အတော် ခရီးရောက်နေလောက်ပါပြီ။ နှစ် -၂ဝ အကြာ ၂ဝ၁ဝ မှာ အတော်လေးလဲ ခရီးပေါက် ရင့်ကျက်နေနိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာ တွေက အဟောင်းမဟုတ်တော့ဘဲ ပြဿနာအသစ်၊ စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေအတွက် ပြင်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရလောက်ပါပြီ။ အခု အနှစ်-၂ဝ နောက်ကျပြီးမှ ခရီးစကျမယ်ဆိုတော့ နောက်ကျသွားလို့ ဆုံးရှုံးရတာ နှစ်-၂ဝ တင်မကပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သူများနိုင်ငံတွေကလဲ ရပ်မနေပါဘူး။ နိုင်ငံတခုအတွက် opportunity cost တွေ ဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ် ဆိုတာ ကျနော်တွက်ဆကြည့်တော့ ဝမ်းနည်းစရာပါ။ အခုအထိတိုင် လွတ်လပ်ရေးရချိန်က စခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ရယ်၊ ပြဿနာဟောင်းတွေရယ်မှာပဲ ကျနော်တို့ လည်နေကြရတုန်း မဟုတ်ပါလား။ Tweet